By ဝေယံအောင် 26 December 2017
၁။ နိုင်ငံကျော် သရုပ်ဆောင်များ တင်ဆက်မည့် တော်ဝင်နှစ်သစ် နှင်းဆီအငြိမ့်ကပွဲကို ရန်ကုန်မြို့၊ ပြည်လမ်းရှိ တော်ဝင်ဂါးဒင်း ဟိုတယ်တွင် ၃၀.၁၂.၂၀၁၇ ရက်နေ့ည ၇ နာရီတွင် ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်မည်။ ပွဲလက်မှတ်များကို ၃ သောင်းကျပ်မှ ၁ သိန်းကျပ်အထိသတ်မှတ်ထားပြီး တော်ဝင်စင်တာ(ပြည်လမ်း)၊ မန်းသီရိတေးသံသွင်း၊ A & T မုန့်တိုက်၊ Nobody (ရန်ကင်းစင်တာ) တို့တွင် ဝယ်ယူနိုင်ကြောင်းသိရသည်။
၂။ လူ့အခွင့်အရေး လူ့ဂုဏ်သိက္ခာ ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကို ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ မဟာဗန္ဓုလပန်းခြံတွင် ၃၀.၁၂.၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွင် Animation ရုပ်ရှင် ၁ ကား၊ ဇာတ်လမ်းတို ရုပ်ရှင် ၁၀ ကား၊ မှတ်တမ်းရုပ်ရှင် ၂ ကား၊ စုစုပေါင်း ရုပ်ရှင် ၁၃ ကား ပြသသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
၃။ နိုင်ငံကျော်တေးဂီတအဖွဲ့ IRON CROSS ၏ New Year Countdown IC Live show ပွဲကို ဒဂုံမြို့နယ်၊ မိုင်ဒါကွင်း တွင် ၃၁.၁၂.၂၀၁၇ ရက်နေ့ည ၉ နာရီခွဲတွင် ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ဝင်ကြေးအခမဲ့ဖြစ်ပြီး အဆိုပါပွဲကို Big9TV (Facebook) နှင့် MRTV ရုပ်သံတို့တွင် ထုတ်လွှင့်ပြသသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
၄။ အာဇာနည်စန်းစန်း ဆပ်ကပ်အဖွဲ့နှင့် မျက်လှည့်ပညာရှင်များ ပါဝင်တင်ဆက်မည့် ရန်ပုံငွေဖျော်ဖြေပွဲကို ဗိုလ်တထောင် ဘုရားပွဲတော်တွင် ၂.၁.၂၀၁၈ မှ ၅.၁.၂၀၁၈ ရက်နေ့အထိ ပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်သည်။ ဖျော်ဖြေပွဲမှ ရရှိငွေများကို ဆပ်ကပ်မျက်လှည့်လောကသားများ အတွက် ကူညီထောက်ပံ့မှုများ ပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
၅။ ပြည်သူ့ရင်ပြင် ညဈေးပွဲတော်ကို ပြည်သူ့ရင်ပြင် Myanmar Culture Valley တွင် ၂၉.၁၂.၂၀၁၇ မှ ၃၁.၁၂.၂၀၁၇ ရက်နေ့အထိ ပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ဈေးရောင်းပွဲတော်တွင် တေးဂီတအစီအစဉ်များနှင့် ကံစမ်းမဲ အစီအစဉ်များလည်း ပါဝင်မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
၆။ တေးသံရှင် Mary ပါဝင်မည့် New Year Countdown Show ပွဲကို ရေတာရှည်လမ်းဟောင်းနှင့် ရွှေဂုံတိုင် လမ်းထောင့်ရှိ Yesta Bar တွင် ၃၁.၁၂.၂၀၁၇ ရက်နေ့ညတွင် ပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်သည်။ ဝင်းကြေး ၁ သောင်းကျပ် သတ်မှတ်ထားပြီး ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၇၃၂၂၈၅၈၆ တွင် ဆက်သွယ်မှာယူနိုင်ကြောင်း သိရသည်။
၇။ နိုင်ငံကျော် အဆိုတော်များပါဝင်မည့် New Year Countdown ဂီတပွဲကို သာကေတမြို့နယ်ရှိ Capital Hypemarket YGN တွင် ၃၁.၁၂.၂၀၁၇ ရက်နေ့ ညနေ ၆ နာရီတွင် ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ဝင်ကြေးအခမဲ့ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
၈။ ပန်းချီနန္ဒာလှိုင်၏ ၄ ကြိမ်မြောက် တကိုယ်တော်ပန်းချီပြပွဲကို ယုဇနဥယျာဉ်မြို့တော်ရှိ Eternal Art Gallery တွင် ၁.၁.၂၀၁၈ မှ ၂၈.၁.၂၀၁၈ ရက်နေ့အထိ ပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်သည်။ ပြပွဲတွင် ပန်းချီနန္ဒာလှိုင်၏ မော်ဒန်ပန်းချီ လက်ရာများကို ကြည့်ရှုခံစားနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
၉။ ပန်းချီဆရာ ၉ ဦးပါဝင်မည့် Planet of Color ပန်းချီပြပွဲကို ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ၄၃ လမ်းရှိ 43 Art Gallery တွင် ၃၁.၁၂.၂၀၁၇ မှ ၂.၁.၂၀၁၈ ရက်နေ့အထိ ပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်သည်။ ပြပွဲတွင် မော်ဒန်ပန်းချီလက်ရာများကို ကြည့်ရှုခံစားနိုင်မည် ဖြစ်ပြီး ဖွင့်ပွဲနေ့တွေ ပန်းချီကား ၉ ကားကို မဲဖောက်ပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
၁၀။ ပန်းချီခေတ်ဘုန်းမို၏ DEADLY RHYME ပန်းချီပြပွဲကို အလံပြဘုရားလမ်းရှိ New Zero Art Space တွင် ၂၉. ၁၂. ၂၀၁၇ မှ ၁၁. ၁. ၂၀၁၈ အထိ ပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်သည်။ ပြပွဲတွင် သေခြင်းတရား၊ ဝေဒနာနှင့် ကဝေဆန်သော သံစဉ်များကို ပေါင်းစပ် ရေးဆွဲထားသော ပန်းချီလက်ရာများကို ကြည့်ရှုခံစားနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ။